PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - Ubuhle bokuba nomngani emsebenzini
Ubuhle bokuba nomngani emsebenzini
KUZO zonke izinkampani oqashwa kuzona uhlangana nabantu abasha, ngemuva kwezinyanga uqale ukubajwayela ngezindlela ezahlukene.
Okwenza ungabajwayeli abantu ngendlela efanayo kwenziwa wukuthi badalwe ngezindlela ezahlukene. Kuzoba khona labo enizojwayelana nigcine seningabangani, kube nalabo obajwayela ngokomsebenzi bese kuba nalabo eningeke nitholane nhlobo nabo hhayi ngoba nixabene kodwa ngenxa yokungatholani kwemimoya yenu.
Nakuba kuyinto eyenzekayo ukuthi abantu bangezwani nje ngisho nangokomsebenzi kodwa lokhu akukuhle, kudinga ukuba kugwenywe ngoba kungagcina kuphazamisa umsebenzi.
Khumbula ukuthi isikhathi esiningi usichitha emsebenzini nabantu osebenza nabo, kwesinye isikhathi nize nithathe nohambo lwangaphandle nibuye nidle nesidlo sasemini ndawonye.
Ngesonto uchitha cishe amahora angaphezulu kwangama-40 nabantu osebenza nabo. Bonke laba bantu bayizinhlobo ezahlukene. Ngokuhamba kwesikhathi empilweni kugcina sekuba nzima ukujwayelana nabantu abasha bangaphandle.
Ngakho abantu ogcina ujwayelana nabo kakhulu kuba yilabo osebenza nabo. Uma kwenzeka ugcina usunomngani emsebenzini, kubalulekile ukuba nazi ukwehlukanisa ubungani nomsebenzi.
Phambilini ngike ngabhala ngobuhle nobubi bokuba nomngani emsebenzini, nezinto okumele niziqaphele.
Ucwaningo luveza ukuthi ukuba nabangani emsebenzini kuhle futhi kuthuthukisa nezinga lokusebenza. Kwenza izisebenzi zikuthokozele ukuvuka ziye emsebenzini futhi kwehlisa nengcindezi yomsebenzi. Kuqinisa ubumbano ezisebenzini futhi uma zizwana zisebenza ngokukhululeka ziwuqede zisenomfutho ophezulu umsebenzi.
Ukuba nomuntu okwazi ukukhuluma naye ngezinto ezingaphathelene nomsebenzi emsebenzini kuyasiza ngoba kuthi noma sekunzima ukwazi ukusheshe uthole umuntu ongakwazi ukubonisana naye futhi oyiqondayo nengcindezi obhekene nayo.
Okumele nikuqaphele wukuthi ubungani benu abungahlanganiswa wukuthi kukhona enimzondayo nobabili enkampanini futhi bungabi obukukhininda izindaba zabanye ozakwenu.
Yenza ubungani benu bunithuthukise ngaphakathi emsebenzini nangaphandle empilweni, kungabi wubungani obuphazamisa ukusebenza kwenu kodwa nikhutha- zane ukuba nenze kangcono ngaso sonke isikhathi.
Ubungani obuhlanganiswe wumgosi abuphumeleli kodwa kunalokho budala ezinye izinkinga. Qhela kuzakwenu ohlebayo nothanda ukukhuluma kabi ngabanye.
Kumele uma unomngani emsebenzini kube wumuntu ozokwazi ukukukhulisa nangomqondo. Bazoba khona abazoba nomona ngobungani benu uma bubukeka buhamba kahle ngakho kubalule- kile ukuba nithembane, ningavumeli okushiwo ngabantu kuniqhathe.
Ubungani buyinto enhle kakhulu kodwa kuya ngani ukuthi nibubekele muphi umgomo.
Khumbula ukuthi uma ningabangani emsebenzini akuphoqelekile ukuthi nize nibe ngabangani nangaphandle komsebenzi. Ngakho kuhle ukuba nikuqonde ukuthi ningabangani ngokomsebenzi noma kungaphezu kwalokho.
Uma sekwedlulele kokwasemsebenzini, kuhle ukuba nobabili nibe sekhasini elilodwa, omunye angazitholi esecikeka nguwena ngoba usumningi kakhulu emehlweni akhe.
Sengiphetha, kunoma yibuphi ubungani nikezanani isikhathi, ningaxinani eduze.
Kwesinye isikhathi kuhle ukuba ningabonani noma izinsuku ezimbili hhayi ngoba nixabene.
ISITHOMBE NGABE: SOLANO COUNTRY BLACK CHAMBER OF COMMERCE
KUYASIZA ukuba nomngani emsebenzini kodwa futhi kungadala izinkinga ngesinye isikhathi.